Somaliland: Madaxweyne Siilaayo Oo Ka Qayb-galay Munaasibad Lagu Soo Xidhayay Diwaangelintii Codbixiyeyaasha - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Madaxweyne Siilaayo Oo Ka Qayb-galay Munaasibad Lagu Soo Xidhayay Diwaangelintii Codbixiyeyaasha
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu maanta ka qaybgalay munaasibad balaadhan oo Komishanka Doorashooyinka Qaranku u qabteen xidhitaanka diwaangelintii codbixiyeyaasha ee dalka ka socotay.
Madaxweynaha oo halkaasi khudbad ka jeediyey waxa ka mid ahaa hadaladiisa “Mudanayaal iyo Marwooyin, Milgo iyo maamuus weyn bay ii tahay in aan maanta ka soo qayb-galo munaasibaddan balaadhan ee lagu xusayo geba-gebadii diiwaangelinta codbixiyayaasha ka qabsoontay Gobollada Jamhuuriyadda Somaliland muddadii u dhexeysay 16/01/2016 iyo 20/09/2016.
Gunaanadka iyo dhammaystirka Mashruuca Diiwaangelinta Codbixiyayaashu; Waa galad Eebe iyo Guul u soo hoyatay guud ahaan Qaranka Somaliland. Waa guul u soo hoyatay Geedi-socodka Dimuqraadiyadda iyo Hannaanka Doorashooyinka Xorta ah ee ka tisqaaday geyigeena hooyo. Waa guul u soo hoyatay Xisbiyada iyo Guddida Doorashooyinka Qaranka. Waa guul ay xaqiijisay xukuumadda aan gadh-wadeenka ka ahay. Ugu horreyn, waxaan hambalyo iyo bogaadin u jeedinayaa ciidammada kala duwan ee qaranka doorkii iyo dedaalkii ay ku lahaayeen taabo-gelinta diiwaangelinta. Marka labaad, waxaan ku hambalyeynayaa Shacbi-weynaha Somaliland sidii xil-kasnimada, xamaasadda iyo xasiloonida lahayd ee ay uga qayb-qaateen diiwaangelintii dalka ka dhacday.